Ma’aha Bernebeu – Garoonka Ay Real Ku Cayaarto Kulamada Gurigooda Iyo Sababta Ka Dambeysa – Garsoore Sports
Ma’aha Bernebeu –…
Ma’aha Bernebeu – Garoonka Ay Real Ku Cayaarto Kulamada Gurigooda Iyo Sababta Ka Dambeysa
Inaad aragto kooxo ku ciyaaraya garoomo maran ayaa kamid ahaa waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee xilli cayaareedkan sii dhammaanaya ee 2020/21, laakiin Real Madrid ayaa talaabo hore u qaaday oo hadda ku ciyaareysa garoon gabi ahaanba duwan.
Garoonkooda caanka ah ee Santiago Bernabeu ayaynan ku cayaarin sanadka oo dhan, waxaana laga yaabaa in ay muddo ku qaadato jamaahiirta kubbada-cagta si ay markale u daawadaan kooxda oo hoygeeda ku cayaareeysa.
Real ayaa kulamada gurigeeda ku cayaareeysa garoonka Estadio Alfredo Di Stefano, oo ah garoon 6,000 kursi ka kooban oo ku yaala xarunta tababarka kooxda oo loogu magac daray mid ka mid ah ciyaartoydii ugu fiicneyd ebid kooxda.
Sababta waa maxay?
Garoonka caadiga ah ee Real, Santiago Bernabeu, ayaa waxaa ku socda dayactir weyn oo la filayo inuu inuu qaato ilaa sannada 2022ka.
Mashruucan oo ku kacaya £ 500m, ayaa markii hore la rabay inay bilaabato sannadkii 2017kii balse ma aysan suuragalin xilligaas waxaana la filayaa in la arko Bernabeu oo heysta awoodda uu 81,000 oo taageerayaal ah kuraas ugu heli karo kulamada kooxda ay garoonkooda ku cayaarayaan.
Real waxay rajeyneysaa inay ku darto xarun dukaameysi, hoteel iyo maqaaxiyo badan garoonka iyadoo isku dayeysa inay kordhiso tirooyinka soo booqashooyinka dalxiis ee sanadkii.
Goolashii Qaalma Rogodka Ahaa Oo Ku Yaraaday Kubada Cagta (SABABTA)
Inter Milan Oo Guul Dirqi Ah Gaartay Hogaankana sii Dheereysatay